Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey haddii Romelu Lukaku uu taam u yahay kulanka berri ee Tottenham – Gool FM
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey haddii Romelu Lukaku uu taam u yahay kulanka berri ee Tottenham
Haaruun July 24, 2019
(Yurub) 24 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xaqiijisay in Romelu Lukaku uu seegi doono kulanka kale ee saaxiibtinnimo, laakiin waxaa la soo jeediyey inuu laacibkan dhaawacan weli bartilmaameed u yahay Inter Milan.
Lukaku ayaa seegay saddexdii kulan ee ugu horreeyey oo ay ciyaartay kooxda Man United ciyaaraha saaxiibtinnimo ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub, waxaana jira warar la isla dhexmarayey oo sheegaya inuu sii wadayo u dhaqaaqistiisa naadiga Inter.
Yeelkeede, Macallin Red Devils ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyey inuu weeraryahanku uu dhaawac qabo, balse dhaawacaas uusan ahayn mid halis ah.
“Lukaku taam noqon maayo, maya,” Solskjaer ayaa sidaas yiri isagoo ku guda jiray shirkiisa Jaraa’id ee ka horreeya kulanka berri.
“Wuxuu la shaqeynayay waaxda jirdhiska bilihii ugu dambeeyay sidaa darteed uma maleynayo inuu ka soo muuqan doono midkan, Maya.”
“Waxa uu isagu ku dhaawacmay tababarka, ma’ahan mid aad u xun, haddii ay ka sii dari lahayd, waxaan u diri lahayn gurigiisa.”
Kooxda uu hoggaamiyo macallinkaan reer Norway ee Manchester United ayaa berri la ciyaaraysa Naadiga Tottenham Hotspur kulan ka tirsan tartanka International Champions Cup.
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda suuqa ee ciyaaryahan Neymar Jr… (Maxaa soo kordhay?)
Miyuu saameyn ku yeelan karaa dhaawaca Asensio, heshiiska uu Ceballos ugu wareegayo Arsenal?... Zidane iyo Unai Emery oo hadlay